Mashandisiro ekushandisa 3D Kubata mamenyu pane iPadOS | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa 3D Kubata mamenyu pane iPadOS
Runyerekupe nezve kupera kwechirongwa 3D Touch mu iPhone vari kusimba. Izvi zvinoreva kuti isu tinogona kutaura zvakanaka kune tekinoroji iyo Apple yaisaziva nzira yekushandisa kubva panguva yekutanga asi kuti mamirioni evashandisi vachashuvira. Nekudaro, iyo yekutsiva ye3D Kubata inogona kutoonekwa mune iOS 13 uye iPadOS betas. Chinangwa chiri nyore: vhura mamenyu nezviito zvinokurumidza nekudzvanya kwenguva refu Izvi, kunyangwe zvingaite senge zvinokanganisa, inoitirwa kunge nzira yekumhanyisa kushandiswa kweaya mashandiro. Mushure mekusvetuka isu tinokuratidza.
iPadOS uye iOS 13 inoratidza iyo chaiyo yekuonekana neiyo 3D Kubata
Kunyangwe iOS 13 ichine rutsigiro rweiyo 3D Kubata kwevamwe michina senge iyo iPhone 6S uye 6S Plus, isu tinongofanirwa kumirira imwe yayo tekinoroji inonzi Haptic Touch svika kumidziyo yese nenzira imwechete iyo yaakaita neiyo iPhone XR. Haptic Touch tekinoroji yakafanana neiyo 3D Kubata kunze kweimwe bakoat: chinoyerwa ndiyo nguva yatinotsikirira pachiratidziri uye kwete kumanikidza kunoitwa sezvinoitwa neiyo 3D Kubata. Iyi tekinoroji kiyi yekunzwisisa nyowani iPadOS Kurumidza Kuita Menyu.
Hapana kana eiri matekinoroji maviri akambovapo paIpad, saka kuve nemamenu aya kufambira mberi kwevashandisi veichi chishandiso. Kana iwe uine iPadOS yakaiswa severuzhinji beta pane yako iPad chete Dhinda kwemasekondi mashoma uye nekukurumidza kusunungura. Mukana wekusaburitsa, iwo maficha ekushandisa anotanga kuzunguzika uye isu taizogonesa iyo edit mode, tichikwanisa kudzima kana kufambisa kunyorera kutenderera padhibhodhi. Izvo zvirimo zvinoratidzwa mune aya anokurumidza chiito mamenu Izvo zvakafanana izvo zvatiinazvo mu iPhone ine 3D Kubata pane zvigadzirwa zvinotsigirwa.
Kana pasina basa riripo, chiito chinonzi «Share application» chichaonekwa. Asi muzviitiko zvakaita seizvo zvekushandisa zvechivanhu uye mamwe maapp, ivo vanoratidza zvimwe zviito sekuvhura magwaro zvakananga kana kuvhura windows nyowani nezvimwe zvirimo. Nekufamba kwenguva, vagadziri vanozoona kukosha kwazvo iko kuti application iva nekukurumidza mapfupi mapfupi ne mapfupi kudzivirira kuenda kunotsvaga chiitiko chingave chiri mumamenyu matsva ePadOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa 3D Kubata mamenyu pane iPadOS
Pegasus anoti ine mukana weICloud, FaceBook, Microsoft uye mamwe masevhisi zvakare